I-Venezuelan Dredging Fleet Yakha Umnotho - I-Ellicott Dredges Blog
Source: Ukwakhiwa Komhlaba Nokwakhiwa Kwasolwandle
Mhlawumbe esinye sezibonelo ezihamba phambili zokuthinta ngqo ukukhula komnotho wezwe kungabonakala eVenezuela. Ukwehliswa kwesondlo minyaka yonke eLake Maracaibo naseMfuleni i-Orinoco kudlule ama-cubic metres ayizigidi ezingama-70. Ngaphezu kuka-70% womkhiqizo kazwelonke waseVenezuela uvela kuphethiloli okhishwe ezingxenyeni ezingaphansi kweLake Maracaibo, ngaleyo ndlela kudale isiminyaminya esiningi emathangini angena naphuma echibini.
I-Instituto Nacional de Canalizaciones (INC) inesibopho, njenge-ejensi kahulumeni, yokwakha nokwenza konke ukucwaninga nokwakhiwa okuhlobene nalokho nobunjiniyela bamachweba olwandle ase-Venezuela naphakathi nezwe, amatheku, izindlela zamanzi namachibi. I-INC igcina izimoto zayo zokwehlisa kanye nezinkontileka zokudonswa okungeziwe kusuka kosonkontileka abazimele lapho kudingeka.
I-INC yadalelwa ukuphatha uhlelo olusha lokudonsela phansi ukuze ijule isiteshi esijikelezayo seLake Maracaibo sisuka kumaphakathi wamamitha ama-11 kuya ekujuleni okusha kwamamitha we-35. Ngaphambi kwalokhu izinkampani ezizimele zikawoyela ezisebenza eLake Maracaibo zazisayine inkontileka yazo zonke izinto ezaziphinde zibhadwe.
Ngaphezu komsebenzi oqhubekayo wokulungiswa kwesiteshi esiteshini iLake Maracaibo, i-INC iphinde yabuyisela indawo entsha yezimboni ogwini olusempumalanga yeTablazo Bay. E-El Tablazo, i-Instituto Venezolano de Petroquimica (IVP) ephethwe nguhulumeni yiyona ebamba iqhaza kule projekthi-ukulungiselela indawo, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokuhlinzeka ngezinto ezisetshenziswayo kanye nezinto zokwakha, ukwakha amadokhethi kanye nezindawo ezisebenza ngophethiloli ezizoba yitshebo lenkimbinkimbi. .
I-El Tablazo yathuthukiswa ngezigaba ezimbili. Ukutshala imali okuyinkimbinkimbi kwaba ama- $ 1.2 billion.
Ukubuyiselwa kokudonswa kabusha kwenziwa yilo dredge “Elandelayoibo", I-Ellicott® Brand ukuncela umsiki we-20-intshi wokukhipha dredger yakhelwe ngo-1969 ye-INC.
Ukuze kusheshiswe ukuqedwa kweProjekthi yeTablazo, i-INC yanquma ukuthenga enye i-dredge, iyunithi le-36 ″ (914mm) futhi yanikeza i-Ellicott International yaseBaltimore. I-dredge ibizwa ngegama elithi "Carabobo ”ngemuva kwempi edumile yenkululeko yaseVenezuela. ICarabobo idonselwe lapho kwakhiwa khona iThablazo Project ukuqala nokuqedelela ukubuyiselwa kwesitshalo se-petrochemical. U-Ellicott unikele ngethimba lochwepheshe abane bokudonsa ukuze babone iPhrojekthi yeTablazo futhi iqinisekise ukuhlangabezana nengxenye yesikhuthazo / yenhlawulo yenkontileka yabo maqondana nokusebenza kwelanga.
Okuthakazelisa kakhulu yiHydraulic Laborator kanye nesibonelo seLake Maracaibo, eseMaracaibo City ngokubambisana neCentral University yaseVenezuela. Zonke izici zomsebenzi wokudonsela phansi esiteshini iMaracaibo kanye neTablazo Project zithathwa njengemodeli ye-hydraulic.
Iphrojekthi yocwaningo eMIT (Massachusetts Institute of Technology) nase-INC yenze uhlelo olukhethekile lokuhlola e-Hydraulic Laboratory ngezinye izindlela zokulawula isiteshi saseMaracaibo. Ucwaningo, olunesihloko esithi "Uphenyo Lwezinsimu Lokunquma Imithombo Yenzika Nokungena Kosawoti Esigodini SaseMaracaibo, eVenezuela," beligxile emibuzweni eminingana ephathelene nokudonswa komhlaba okwedlule. Phakathi kokufakwa kwemodeli ye-hydraulic ohlelweni lokudonswa phansi eMaracaibo kukhona ukuhlolwa kwemiphumela yokugcwaliswa komhlaba njengaseTablazo, isimilo sokukhukhumeza kokungena esiteshini kusuka ekusetshenzisweni kwe-sidecasting boom kuZulia, kanye nemiphumela yemvelo yokushintsha ukugeleza amanzi ngokwakhiwa kwezindonga zolwandle noma okunye okuphambukisa ekugelezeni kwamanzi okuvamile.
Inhlangano ye-INC isebenza kahle ekwenzeni umsebenzi wokwakha kabusha ngokuhlanganisa ucwaningo, ukuhlola, ukuhlola, nokubheka iphrojekthi uqobo. Ubunjiniyela, ukuphathwa, ucwaningo nokwakhiwa kwe-INC konke kungaphakathi kwemizuzu yomunye nomunye. Umthelela wezezimali oqinisekisa ukusungulwa kwalezi zikhungo wawukhona nemiphongolo engaphezulu kwezigidi ezingama-700 kaphethiloli ongahluziwe ethuthwa ngomzila waseMaracaibo minyaka yonke, kufaka phakathi amathangi angaphezu kuka-3,500 7,000 angena echibini, noma ukuwela komzila wesiteshi.
I-Inc iveza imodeli kwamanye amachweba amakhulu okufanele icatshangelwe ngokubuka kokuba ne-hydraulic modeli yayo kanye nabasebenzi bonjiniyela abasondele ethekwini kulezo zimo lapho kuthuthukiswa khona njalo nokulungiswa kokudonswa kwemoto okudingekayo. Ngokugcizelelwa kwemiphumela yokungcola kanye nokukhathazeka kokuphinda kuguqulwe ekushintsheni kokuziphatha kwamachweba, amabhasi, nemisinga, isiphakamiso sisebenza nangaphezulu. IVenezuelan Waterways Institute (INC) ifanelwe ukuqashelwa okukhethekile ngokukufezile ekuqhubekiseleni phambili ubuchwepheshe bokukhulisa kabusha eMaracaibo.
Kucashunwe kuWorld Dredging & Marine Construction
Qala Iphrojekthi Yakho Yokulungisa Amanzi Nge-Ellicott